Portsgbọelu | RayHaber | raillynews
HomeỤzọ Awara AwaraỤgbọelu
Turkey, na ọdụ ozi ọma, Airport contracts na Procurement Results
Mgbe emechara usoro ya niile, ọdụ ụgbọ elu Istanbul ga-enyefe ụgbọ elu ihe karịrị narị atọ ga-enwe ikike njem 200 nde kwa afọ. Ihe nkiri anakpo ụgbọ elu maka ọdụ ụgbọ elu Istanbul, nke ga-anabata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300 ụgbọelu, na-akwadebe izute ndị na-ege ntị. [More ...]
Portsgbọelu TAV na-akwado ịnabata ndị njem na June 4 nke ọdụ ụgbọ elu ise dị na Turkey. Nzọụkwụ megide coronavirus emechaala. Ejikwara site na ọdụ ụgbọelu TAV, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Alanya Gazipaşa na [More ...]
Bilal Ekşi, onye isi njikwa nke ụgbọ elu Turkish (THY), onye a kwụsịtụrụ n'ihi ụdị ọrịa coronavirus ọhụrụ (Kovid-19) ma ga-amalite ife efe ọzọ na June, bụ ihe na-amanye na oche ndị dị n'akụkụ ga-anọgide na-efu na ụgbọ elu ahụ. [More ...]
Airportgbọ elu ụgbọ elu Istanbul, nke bụ HUB zuru ụwa ọnụ na afọ mbụ ya na ụlọ ọrụ ya pụrụ iche, akụrụngwa siri ike, teknụzụ dị elu na ahụmịhe njem dị elu, na-agbakwunye onye ọhụụ na mmezu ya ma nwee akwụkwọ “LEED Gold”. [More ...]
E wuchaala ulo oru igwe ejima nke anakpo NuD38. N ụgbọelu Nuri Demirağ wuru ya na mbọ nke ndị azụmaahịa kacha mkpa na Turkey pụtara na ha agaghị eme ọzọ ụgbọ elu ya. N'oge na-adịbeghị anya [More ...]
Minista na-ahụ maka njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu kwuru na Ministri niile emeela ihe dị iche iche n'ọgụ a na-ebuso agha Covid-19 nke bidoro na China wee bụrụ ọrịa zuru ụwa ọnụ. Gbọ njem na ebe a [More ...]
Etu ị ga-esi nye gị ikike iji njem njem? e-Gọọmentị Ikikere enyocha Asambodo Njikwa
Etu ị ga-esi nye gị ikike iji njem njem? e-Gọọmentị Njikwa Ikikere Ọchịchị: Ihe dị gị mkpa iji nweta akwụkwọ ikike njem njem? Kedu onye nwere ike inweta akwụkwọ ikike njem ahụ? Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru, “I nyela ikike njem nke obodo [More ...]
Ọnwụ zuru ụwa ọnụ na Aviation $ 314 ijeri
KPMG Turkey ga-enyocha nsonaazụ nke ntiwapụ ngalaba logrovirus. Gburugburu ụwa n'okporo ụzọ ikuku, ala na oke osimiri, na-egosi na ebighachiri ya na ndị njem na-ebugharị njem njem Ngalaba Onye Ọchịchị, KPMG Turkey Yavuz Öner kasị ukwuu. [More ...]
Turkish Cargo Na-ebido Ife Na lightszmir
Turkish Cargo (THY), ụdị ụgbọ mmiri nke ụgbọ elu Turkish Turkish, nke rụgoro ọnụ ọgụgụ kachasị elu n'etiti ndị na-ebu ụgbọ elu 25 kacha elu, na-aga Izmir na 28 Mee, na-enwe ụgbọelu kwa ụbọchị. [More ...]
Na DHMI, nke bụ otu ritere uru nke ụbọchi mkpokọta oge ise nke ndị na-ahụ maka njem ụgbọ elu-Sen, ụgwọ ụgwọ ọrụ oge ọrụ ha ugboro atọ. Edebere ụgwọ ọnwa ọrụ oge ọnwa abụọ maka afọ 5 na mgbakwunye ọnụego njem. [More ...]
N'oge usoro ọgbụgba na-efe efe nke Pavid-19, nke na-emetụta ụwa dum, Istanbulgbọ elu Istanbul na-aga n'ihu mgbochi na atụmatụ mmezi 7/24. Ọ bụ ọnụ ụzọ nke Turkey gaa ụwa, ma bụrụkwa afọ mbu nke ọnwa ahụ zuru ụwa ọnụ [More ...]
Nguko maka Re-Fighter bidoro n'ọdụ ụgbọ elu Sabiha Gökçen
Istanbul Sabiha Gokcen International Airport (Osh), Covidien-19 gafee Turkey n'ime akporo nke e ji n'ihi akasiaha on March 28 n'ọnụ ụzọ dị ka ma ọ bụrụ na-enye nwa oge nkwenye nke ndị ọchịchị mgbe ezumike ozi 28 [More ...]
Keskin: 'Anyị na-arụ ọrụ maka asambodo ọhụrụ maka ọdụ ụgbọ elu n'enweghị coronavirus'
Boğaziçi Mahadum Association (BURA) na-atụle mmetụta nke oria ahụ na ngalaba ahụ na-eji aha ndị dị n'ọhịa ahụ eme ihe n'ụzọ “cingchọta Nnukwu Ọnọdụ Ntaneti Ahụ”. Nsonaazụ nke ọrịa oria ojoo na ụlọ ọrụ na ọdọ ụgbọelu na ebe omumu ihe emere na 5 Mee [More ...]
Kagbuo ụgbọ elu n'ihi oria ojoo nke Covid-19 agbanweela ọdụ ụgbọ elu ịbụ obodo ndị mmụọ. N’April, njem ndị njem na-ada pasent 99 ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga, ebe naanị mmadụ 84 nwere ike ife. 65 n’ime ha [More ...]
IATA Akwadoro Jiri mmanu kpuchie nkpuchi
Transporttù Na-ahụ Maka Transportgbọ elu International, IATA, nke na-anọchite anya ndị na-anya ụgbọ elu ụwa, tụrụ aro iyi ihe mkpuchi mmachi na ụgbọ elu iji gbochie mgbasa nke nje corona mgbe ịmaliteghachi ụgbọ elu. David, onye ndụmọdụ ahụike nke International Air Transport Association [More ...]
DHMI mara ọkwa ..! Atatürk Airport Runways Lee Gịnị Mere Ebibiri?
Onye isi nchịkwa ndị isi ọdụ ụgbọ elu steeti (DHMİ) kwuru n ’ụzọ gbara ọsọ na ọdụ ụgbọ elu Atat Atrk maka oge mbụ. Na nkwupụta ahụ, ụzọ ijeri okporo ụzọ ijeri 14 ahụ metụtara n'ụzọ ọ bụla na-emetụta ịrịda ụgbọ elu na ọdụ ụgbọelu Istanbul. [More ...]
Emebela ụlọ ọgwụ n'ọdụ ụgbọ elu abụọ nke Ijeri Atatürk ..!
A na-aga n'ihu iwu ụlọ ọgwụ Yeşilköy, nke a rụrụ n'okporo ụzọ abụọ nke ọdụ ụgbọ elu Ataturk mechiri emechi, ọnụ ahịa ruru ijeri dollar abụọ. "Ha bibiri isi ihe dị mkpa dị mkpa," KaraP CHP kwuru. Dị ka akụkọ Yusuf Demir si SÖZCÜ si kwuo; [More ...]
Ebufere ọdụ ụgbọ elu nke Ataturk na General Directorate nke National Real Estate!
E si na ọdụ ọdụ ụgbọelu nke steeti weghaara Atatürk ma nyefee ya na ngwongwo nke General Directorate of National Real Estate n'okpuru Ministry of Environment and Urbanization. Ügbọ elu Atatürk rụrụ na 17 aka nri na 35 ụzọ ụgbọ elu [More ...]
A na-eyigharị ụbọchị mmeghe nke Rize Artvin?
Ministry of Transportation na Infrastructure 766 hectare na atumatu olu ntọala tọrọ afọ atọ gara aga, Turkey ga-wuru na oké osimiri na-egbo 3nd ọdụ, Rize- Artvin Ọ bụ ezie na ndị na-ewu ọrụ dị ka coronavirus akasiaha Airport [More ...]
N'ime oke nke usoro e mere megide ọrịa coronavirus, Mardin Obodo ukwu na-aga n'ihu na -emecha ihe na nyocha nke obodo niile. Thegbọ elu na-eburu ụmụ amaala anyị si Iran na-alọta banye na ọdụ ụgbọ elu Mardin. Mardin [More ...]
Achọrọ arịrịọ UTIKAD iji kwụsị ụlọ mgbazinye ụlọ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu
UTIKAD na-achọ ihe ga-eme ka ọ dịrị na-ebelata ọnọdụ ọjọọ ndị ụlọ ọrụ ngwa agha na-akpata n'ihi ntiwapụ nke Coronavirus. N'akụkụ a, UTİKAD na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ebu ibu n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul na Atatürk. [More ...]
E mechiri maka ọdụ ụgbọ elu Trabzon maka ọnwa 1
Turkey kasị mkpa na-emi odude n'etiti ọdụ 29 puku afọ na ya ụgbọelu si ọdịda Trabzon Airport si runway e weere elekọta. Mpaghara Trabzon Metropolitan, ihe akụrụngwa sitere na mmeghari ohuru nke okporo ụzọ [More ...]